दशैको मुखमा हेर्नुहोस,दुधे ब च्चा सहित ४ सन्तान छोड़ी आमा एकाएक गा यब ! आमा भन्दै यस्तो गर्छन-भिडियो हेर्नुहोस – Online Saptarangi
दशैको मुखमा हेर्नुहोस,दुधे ब च्चा सहित ४ सन्तान छोड़ी आमा एकाएक गा यब ! आमा भन्दै यस्तो गर्छन-भिडियो हेर्नुहोस
October 23, 2020 October 23, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on दशैको मुखमा हेर्नुहोस,दुधे ब च्चा सहित ४ सन्तान छोड़ी आमा एकाएक गा यब ! आमा भन्दै यस्तो गर्छन-भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला ।यो पनि पढ्नुहोस, ४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयबारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन् ।
November 4, 2020 November 4, 2020 Prakash Waiba